Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Diso planeta indray i Patrick Rajoelina
Inty sy Nday : Diso planeta indray i Patrick Rajoelina
Nanipika ny fahatsiarovan-tenan’ny sokajin’olona maro momba ny fanehoana ny lanjan’ny kolotsaina Malagasy hoe “voin-kava-mahatratra” izahay teto omaly. Nitanisa ny ampahany vitsy tamin’ireo maro izay nentanin’ny fahatsoram-po sy ny fitiavana ny mpiray tanindrazana ka nanetsi-tena nitondra ny anjara birikiny hanampiana sy hanohanana ary hamonjena sy hanavotana ny mpiray tanindrazana izay nianjadian’ny voina tamin’izao tondra-drano manafotra ny tanàna izao sy ny loza hafa nateraky ny ora-nikija, toy ny fihotsahan’ny tany sy fianjeran’ny trano.
Navoitranay teto omaly ny ezaka nataon’ny fitondram-panjakana izay nanetsika ny rantsa-mangaikany sy ny rafitra an-tanan-tohatry ny fitantanan-draharaham-panjakana. Tsy tazana mba nihetsika ho amin’ny fanentanana ny fianakaviambe iraisampirenena kosa ny fitondram-panjakana, nefa fanta-poko fanta-pirenena fa tsy zakan’ny fanjakana samirery ny miatrika ny famonjena sy ny fanarenana nateraky ny voina toa izao.
Marina ary ekena fa manana ny masoivohony eto avy ny firenena manana fifandraisana ara-diplaomatika amintsika eto Madagasikara. Tsy iadian-kevitra fa mahita maso ny fahavoazana izy ireo, saingy ny lalànan’ny fifandraisana iraisampirenena dia manery ny fitondram-panjakana hanome ny vaovao sy ny zava-misy amin’ny fianakaviambe iraisampirenena, ary izany dia atao amim-pomba ofisialy fa tsy mianona amin’ny vaovao avoakan’ny gazety. Sanatriavin’ny vava, tonga amin’ilay fitenenana hoe “alahelo tsy ambara amin-kavana, zakan’ny tompony”. Isika Malagasy rahateo, mpikambana eo anivon’ny rafitra iraisampirenena sy ny fianakaviambe iraisampirenena ka manan-jo hisitraka fanampiana sy fifamonjena raha tojo voina voajanahary toa izao.
Rehefa nanao fanadihadiana izahay dia ny ministeran’ny raharaham-bahiny no tompon’andraikitra voalohany tokony hanetsika ny firenena manana fifandraisana ara-diplaomatika amintsika sy ireo fikambanana iraisampirenena isan-tsokajiny miara-miasa amintsika Malagasy. Tsy nanao izany ny ministeran’ny raharaham-bahiny raha tsy omaly. Tena diso planeta ve ny “vahiny minisitra nampisahanina ny diplaomasia Malagasy”, dia i Patrick Rajoelina ? Tonga amin’ilay fitenenana hoe “taitra ny hafa tsy mba taitra fa taitra irery vao mamaky takotra”. Efa hatramin’ny zoma no niseho ny voina. Nihamafy izany ny sabotsy, ary efa nisy ny fahavoazana goavana, ny tra-boina amin’arivony. Nihombo izany ny alahady. Omaly talata anefa ny “vahiny minisitra misahana ny diplaomasia malagasy” Patrick Rajoelina vao nandefa taratasy ho an’ny fianakaviambe iraisampirenena ka namory ny diplaomaty vahiny eto. Tsy nihetsika ve raha tsy nisy ny lahatsoratra nataonay tamin’ny teny vahiny teto amin’ity gazety ity omaly ? Tena diso planeta Ingahy Minisitra e ! Noheveriny fa any amin’ny Planeta Mars ve izy ka tsy tazany fa dobo rano ny faritra maro eto amin’ny Nosy noho ny fandalovan’ny rivo-doza Anna sy ny rotsak’orana noho ny fotoam-pahavaratra, ka niteraka tra-boina an’aliny, fahavoazana goavana, fahapotehana fotodrafitrasa maro, fanjavonan’ny tontolom-pihariana marobe, na sehatry ny fambolena na tontolon’ny fiompiana na raharavam-barotra na fanaovana asa-tanana na orin’asa fanodinana, sy ny sisa. Mbola mampibaribary hatrany izany rehetra izany fa tsy vitan’i Patrick Rajoelina mihitsy izany dipalomasia Malagasy izany.